အမေရိကန်အခြေစိုက် သာသနာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့က ရုံးခန်းပြောင်းရွှေ့ကြောင်း ထုတ်ပြန် | MoeMaKa Burmese News & Media
ချမ်းမြ (မိုးမခအထောက်တော်) - စစ်တပ်ပိုင်သိမ်းထားတဲ့ လယ်မြေတွေအတွက် ပေါင်းတည်မှာ ဆန္ဒပြ
လက်ခံရရှိသော အကြောင်းကြားစာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
International Burmese Monks Organization သာသနာ့ဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များ အဖွဲ့ချုပ် နေရာပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခြင်း
Dated: June 26 , 2012
International Burmese Monks Organization. သာသနာ့ဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များ အဖွဲ့ချုပ် တည်ရှိရာ 84-32, Apt 2A, Grand Ave, Elmhurst NY 11373. တွင် သာသနာရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ နှင့် အဖွဲ့ချုပ်ဧ။်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် အိမ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ ကန်ကွက်မှုများ ရှိသဖြင့် ၂-နှစ်ခန့် လုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်းထားရပါသည်။
ထိုကြောင့် သာသနာရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ နှင့် အဖွဲ့ချုပ်ဧ။် လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် မဟာအောင်မြေကျောင်း 72-35, 43rd Ave, Woodside NY 11373 သို့ အဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့ပိုင်ပစ္စည်းများ ယာယီပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ် ထားပါသည်။
International Burmese Monks Organization သာသနာ့ဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော် များအဖွဲ့ချုပ် နှင့် သင့်လျှော်သောနေရာ တွေ့ရှိသောအခါ ထပ်မံ၍ အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ကြောင်းကို June 26,2012 အဖွဲ့ချုပ် အစည်းဝေးမှ တညီတညွတ်တည်း သဘောတူ ဆုံးဖြတ်တော်မူကြသည်။
International Burmese Monks Organization.
သာသနာ့ဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များ အဖွဲ့ချုပ်